डिप्रेशनमा हुनुहुन्छ? यसो गर्नुस – MEDIA DARPAN
डिप्रेशनमा हुनुहुन्छ? यसो गर्नुस
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Nov 13, 2018
जिन्दगीमा सँधै आफूले सोचेजस्तो हुँदैन । कहिलेकाहीँ लगातार परिस्थिती आफ्नो प्रतिकुल हुन सक्छ । यस्तोमा कहिलेकाहीँ मानिसलाई निराशाले सताइदिन्छ ।
भनिन्छ हरेक व्यक्ति जीवनको कुनै न कुनै मोडमा डिप्रेशनको शिकार बन्छ । कसैमा त डिप्रेशन यति हावी हुन्छ कि मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व शुन्य लाग्छ र उनीहरु आफैँलाई कमजोर स्विकार्दै दयाको पात्र मान्न थाल्छन् ।
एक अध्ययनका अनुसार संसारका दुईतिहाई मानिसहरु कुनै न कुनै रुपले डिप्रेशनको शिकार छन् । कारण जे पनि हुन सक्छ । जस्तैः आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा पछाडि पर्नु, आत्मीय मानिसको साथ छुट्नु, आर्थिक समस्या, आधुनिक जीवनशैलीको पछाडि दौडँदादौडँदै थाक्नु आदी ।
डिप्रेशनबाट कसरी जोगिने ?
१. यस्ता मानिसहरुसँग संगत नगर्नुहोस् जसले तपाईंलाई कमजोर देखाउँछन् वा उनीहरुसँगै हुँदा तपाईंमा हिनताको भावना पलाउँछ ।
२. उदासी वा निराशाको भावना पैदा हुनासाथ कुनै राम्रो साथी वा छिमेकीसँग कुरा गर्नुहोस् । मनपर्ने संगीत सुन्नुहोस्, कुनै वाद्ययन्त्र बजाउनुहोस् वा कतै बाहिर घुम्न निस्कनुहोस् । अर्थात कसरी हुन्छ, आप\_mनो मन र विचारलाई अर्कै बाटोमा लैजानुहोस् ताकि तनाव टाढा होस् ।
३. आफूलाई कुनै रचनात्मक कार्यमा व्यस्त गर्नुहोस् । कसैलाई सहयोग गर्नुहोस् । यस्तो कार्यले आत्मविश्वास बढ्छ र आत्मसन्तुष्टी मिल्छ । यस्ता भावनाहरुले तनावलाई छुमन्तर गर्छ ।
४. आफैँसँग डराएर दुखी नहुनुहोस् । यदि कुनै काम गलत भएको छ भने नपछुताउनुहोस् । त्यसलाई भुल्नुहोस् । घोडा चढ्ने मानिस नै घोडाबाट लड्छ तर, फेरि उठेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ बढ्छ भन्ने कुरा नर्बिसनुहोस् ।
जीवनलाई एक सिँढी मान्नुहोस् । यो सिँढीमा चढ्दाचढ्दै कहिलेकाहीँ लड्नुभयो भने पनि दोस्रोपटक सम्हालिनुहोस् र पुरै तागत लगाएर फेरि चढ्नुहोस् ।
५. जिन्दगीमा चाहेको सबै कुरा मिल्दैन । मनोवैज्ञानिकहरुका अनुसार जीवनको साना-साना उपलब्धीहरुमा खुसी हुनाले अगाडि बढ्ने उत्साह मिल्छ । तपाईं आधा भरिएको गिलासलाई आधा खाली भएको रुपमा नहेर्नुहोस् ।
६. असन्तुष्टीको भावनाले केही समयसम्म घेर्नु स्वभाविक नै हो । तर जब असफलतामा बारम्बार रुने गरिन्छ, यस्तो भावना स्थायी हुन्छ । यो स्थितीबाट बच्नुहोस् ।
यसको लागि कार्यप्रणाली र विचारमा परिवर्तन ल्याउनुहोस् । नयाँ तरिका, नयाँ प्रविधि अपनाउनुहोस् । हरेक हालतमा निराशाबाट टाढा हुने बाटो खोज्नुहोस् ।
७. आफ्नो विगतका असफलता तथा दःुखद अनुभवहरुलाई मनमा आउन नदिनुहोस् । भविष्यतर्फ दृष्टि राख्नुहोस् र वर्तमानमा जमाएर कदम राख्नुहोस् । लक्ष्यसम्म पुग्ने इच्छाले नै उत्साह जगाउँछ । यस्तोमा नकारात्मक विचारहरु आउने समय र ठाउँ दुवै मिल्दैन ।
८. हरेक दिन बच्चासँग केही समय बिताउनुहोस् । टिभीमा हाँस्य कार्यक्रम हेर्नुहोस्, चुट्किला पढ्नुहोस् र बच्चालाई पनि सुनाउनुहोस् । बच्चाहरु खुसी हुँदा तपाईंको खुसी दुई गुणा बढ्छ ।
९. नियमित एक्सरसाइज गर्नुहोस् । यसले खुसी दिनेवाला सेरोटिन हार्मोन उत्पन्न हुन्छ । साथै शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ । यसले मनमा राम्रो भावनाहरु तथा सकरात्मक सोच उब्जिन्छ । एक्सरसाइजको सट्टा बिहान ‘मर्निङ वाक’ गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
१०. सँधै ब्यालेन्स डाइट लिनुहोस्, जंक फुडबाट बच्नुहोस् । यसबाट मनोबल उच्च रहन्छ । धुम्रपान र मदिरापानबाट टाढै रहनुहोस् ।
११. आफ्नो खास मित्र तथा परिवारजनसँग आफ्नो तनाव वा समस्याको बारेमा छलफल गर्नुहोस् । उनीहरुबाट कुनै नयाँ बाटो निस्कन सक्छ र डिप्रेसनबाट बाहिर आउन सकिन्छ ।
१२. अनावश्यक कुराहरु सोचेर समय बर्बाद नगर्नुहोस् । अरुलाई माफ गर्न सिक्नुहोस् । नकारात्मक घटना र विचारलाई भुल्न सिक्नुहोस् ।
१३. कसैलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुहोस्, पुराना कुरामा मात्रै सँधै नअल्भिmनुहोस् । खुसी हुनको लागि रमाइला कुराहरु गर्नुहोस्, वरिपरिको वातावरण सुधार्न थोरै समय खर्च गर्नुहोस् ।
पार्कमा समय बिताउनुहोस्, पन्छीहरुको आवाज सुन्नुहोस् र स-साना कुरामा खुसी खोज्ने गर्नुहोस् । कुनै ठूलो सफलता र खुसी मिलेन भनेर मन अमिलो नबनाउनुहोस् ।
तपाईंको आफ्नो विचार र आत्मविश्वासले नै तपाइर्ंलाई तनावबाट बचाउँछ । तनावले नै डिप्रेशन निम्त्याउन सक्ने भएकाले हरसम्भव खुसी हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
यस्ता छन् ओखरको औषधीय गुण
कम बच्चा जन्माउँदा पनि घाटा